Cali Khaliif Galeyr oo faah-faahin ka bixiyey kulamo uu la yeeshay Muuse Biixi & hoggaamiyaasha mucaaradka
Hargeysa (RH) Madaxweynaha Khaatuma Prof Cali Khaliif Galeyr ayaa faah-faahin ka bixiyey kulamo uu magaalada Hargeysa kula yeeshay madaxweynaha la doortay Muuse Biixi Cabdi iyo hoggaamiyaasha mucaaradka Somalilad.
Cali Khaliif oo la hadlay weriyayaasha ayaa sheegay in kulamadaas ay ku saabsanaayeen heshiiskii dhawaan madaxda Somaliland iyo Khaatumo ay ku kala saxiixdeen magaalada Ceynab.
“Waa is aragnay madaxweynaha la doortay oo labo jeer ayaa kulannay oo wakhti badan ayaan isku helnay waxaa ka hadalnay arrimaha guud, Muuse waxa uu ka tirsanaa xisbiga marka rag xisbigaas ka tirsan baa labo sanno wadashireynay waana uu u la socday Muuse oo tii uunbaa isla soo qaad-qaadnay iyo doorashadii oo isaga iyo xisbiyada Somaliland aan ku bogaadiyey sida nidaamka fiican ee nabadda ku dhammaatay”ayuu yiri Cali Khaliif Galeyr.
Waxa uu sheegay in madaxweynaha iyo labada xisbi ee mucaaradka ay si buuxda u taageereen heshiiska labada dhinac ay ku gaareen Ceynaba.
“Waxaa nasiib wanaag ah in seddaxdooda ay lee yihiin 100% waa taageereynaa heshiiska Khaatuma iyo Somaliland waxaana ay lee yihiin waa in la sii wadaa”ayuu yiri Cali Khaliif Galeyr.
Waxa uu soo jeediyey in Khaatumo lagu darro hey’addaha Somaliland isla markaanna la dhiso Somaliland oo loo dhan yahay.
“Haddii Somaliland lawad lee yahay waa in ay ka muuqataa dareenka aan ka qabno habka ay hadda maamulka ku socota, waa in sharci loo dhan yahay la helo isla markaanna Somaliland loo dhan yahay”ayuu yiri Prof Galeyr.